Madasha Xisbiyada Qaran “Waxaan ka shirnay sidii loo sameyn lahaa guddi-qiimeyn ku sameeya Qaraxii Ex-Kontoro” – Kalfadhi
Madasha Xisbiyada Qaran oo xalay shir ku yeeshay magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ay uga wada-hadleen sidii gurmad iyo garab istaag loogu sameyn lahaa dadkii Soomaaliyeed ee wax ku noqday qaraxii maalin ka hor ka dhacay Ex Koontarool Afgooye.
Shirkan ay isugu yimaadeen Madasha Xisbiyada Qaran oo uu shir guddoominayay Sheekh Shariif ayaa looga hadlay sidii taageerayaasha Xisbiyada ku mideysan Madasha iyo Umadda Soomaaliyeed loogu abaabuli lahaa inay doorkooda qaataan.
Sidoo kale waxaa laga hadlay sidii Guddi qiimeyn ku sameeyay qaraxii maalin ka hor ka dhacay iyo khasaarihii uu geystay loogu saari lahaa.
Madasha ayaa sidoo kale ka shiray aragti ku biirnita sharciga doorashooyinka Qaran oo dhawaan golaha Shacabka uu ansixiyay, loona gudbiyay Aqalka sare.
Hoggaamiyeyaasha Madasha sida Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxmuud, ayaa isbitaalada ku booqday dhaawacyada, waxaana ay Alle uga baryeen in caafimaad taam ah uu siiyo.